Firenena mihemotra : gisitra amin’ny lafiny angovo i Madagasikara | NewsMada
Firenena mihemotra : gisitra amin’ny lafiny angovo i Madagasikara
Laharana farany amin’ny lafiny angovo i Madagasikara (189/189). Tsy hampazoto ny mpampiasa vola vahiny ny tranga toy izany.
Tsy mitsaha-maizina ny sehatra samihafa eto amintsika. Fotodrafitrasa ilain’ny mponina sy ny fandraharahana ny famokarana angovo sy herinaratra. Araka ny tatitra navoakan’ny Vondrona eoropeanina (UE), mikasika ny tontolo toekarena eto amintsika, “tsy mamaly ny filàna ahafahana mampandroso ny toekarena sy miohatra amin’ny fitombon’ny mponina ny fotodrafitrasa mamokatra sy ny fitsinjarana herinaratra eto Madagasikara”. Mibahana amin’ny famokarana herinaratra ny fampiasana solika. Zara raha 165 Mw ny herinaratra avy amin’ny tohodrano, lazaina fa manana otrikarena aminy hatramin’ny 7.800 Mw.
Notohizany ny fanazavana, fa raha ny taona 2013, ny 12 hatramin’ny 13%-n’ny Malagasy monja ny manana herinaratra. Raha ny fanadihadiana ny Doing Business 2015, mitana ny rambony, firenena faha-189 amin’ny 189, i Madagasikara amin’ny famatsiana herinaratra isaky ny mpanjifa (raccordement à l’éléctricité).
Mihemotra ny mpandraharaha vahiny
Ity lafiny angovo sy herinaratra ity ny laharana ratsy indrindra ho an’i Madagasikara, raha manakaiky ny farany ny sehatra hafa. Faha-164 amin’ny 189 amin’ny fandraharahana ankapobeny (Doing Business), firenena fahadimy mahantra indrindra maneran-tany amin’ny firenena. Raha ny famoronana orinasa, nihemotra any amin’ny faha-128 isika, araka ny Doing Business 2016, raha tany amin’ny faha-112 ny taona 2015.
Manamarina ireo notanisaina ireo fa mihemotra i Madagasikara fa tsy an-dalam-pandrosoana na mandroso. Firenena tsy misy ady an-trano i Madagasikara, saingy anjakan’ny kolikoly, tsy voahaja ny lalàna sy ny fiarovana ny fampiasam-bola vahiny, sns.